Muqdisho: Barlamanka oo ansixiyay Miisaaniyada 3 bilood ee soo aadan. - Caasimada Online
Home Warar Muqdisho: Barlamanka oo ansixiyay Miisaaniyada 3 bilood ee soo aadan.
Muqdisho: Barlamanka oo ansixiyay Miisaaniyada 3 bilood ee soo aadan.
Baarlamanka Soomaaliya ayaa Kulankooda Afar Tobanaad waxaa ay maanta ku yeesheen Magaalada Muqdisho waxaana ay Xildhibaanada ay kaga doodayeen Arinta Miisaaniyada.
Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Proff Jawaari iyo labdiisa ku xigeen ayaa maanta shir gudoominayay kulankan waxaana hadalo kooban uu gudoomiyaha u jeediyay Baarlamanka kaas oo ahaa inay ka soo talabixiyaan Miisaaniyada ay ku shaqayn doonto Dowlada Sadaxda bilood ee soo aadan.
Inta uu socday kulanka Baarlamanka ayaa gudoomiyaha waxaa uu la kulmay siihayaha xilka Wasaarada Maaliyada Iyo Agaasimaha Wasaaradaasi,waxaana intaa ka dib cod loo qaaday Ansixinta Miisaaniyada ay ku shaqaynayso dowlada sadaxda bilood ee soo aadan.
Baarlamanka ayaa cod kadib waxaa ay ogaaladeen Barnaamijka Miisaaniyada waxaana uu Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan jawaari ayaa ku dhawaaqay in xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ay ogolaadeen miisaaniyada muddada saddexda bilood ee soo socota Dowladda.